दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई १६ करोड अनुदान «
दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई १६ करोड अनुदान
हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले दुग्ध किसानलाई चालु आर्थिक वर्षमा १६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । नियमित रुपमा सहकारीलाई दूध बिक्री गरेको आधारमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान रकम वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले अनुदानको लागि दुग्ध सहकारीहरुलाई प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । माघ ९ गते नै एक महिनाको समय राखेर प्रस्ताव आह्वान गरिसकिएको छ । प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका दुग्ध सहकारी संस्थाहरुले अहिले भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र निर्देशनालयमा धमाधम प्रस्ताव पेश गरिरहेका छन् । “हामीले ८ करोड लिटर दूधको २ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं । प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि पूरा गरेर आउने सहकारी संस्थाहरुमार्फत अनुदान वितरण सुरु गर्छौं ।” पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी डा. बबलु ठाकुरले भने, “फागुनको ९ गतेसम्म आएको प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गरी सहकारी छनौट गरेर उनीहरुको खातामा रकम पठाइदिन्छौं । सरकारीमार्फत किसानहरुले एकमुष्ठ रकम बुझ्छन्, त्यो रकम बुझेको भरपाई हामीलाई पठाउनुपर्नेछ ।”
अनुदान प्राप्त गर्नको लागि किसानले सहकारीमार्फत नै दूध बेच्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । गत वर्ष दूध बिक्री गरेको आधारमा यो वर्ष किसानले अनुदान पाउनेछन् । भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार अनुदान पाउनका लागि दुग्ध सहकारीहरुलाई पनि मापदण्ड तोकिएको छ । सम्बन्धित दुग्ध सहकारी संस्थाले दैनिक कम्तिमा ३ सय लिटर दूध संकलन गरेको हुनुपर्ने साथै वार्षिक कम्तीमा २ सय दिन दूधको कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ । एउटै दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई ३ वर्षसम्म मात्र अनुदान उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशनालयमार्फत गत वर्ष पनि करिब ८ करोड लिटर दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँको दरले अनुदान उपलब्ध गराएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रामप्रकाश प्रधानले बताए । यस वर्ष प्रदेश सरकारले दूधमा दिइने अनुदान प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बनाएको हो । मन्त्रालयले दूधमा अनुदान वृद्धि गरेता पनि यो वर्ष पशुपंक्षीका अन्य कार्यक्रमहरुमा भने कटौती गरेको छ ।
पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकासको लागि अनुदान र भौतिक निर्माणमा गरी चालु वर्षमा १९ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा दूधमा मात्र १६ करोडको अनुदान दिइनेछ ।
बाँकी ३ करोडबाट ६ वटा कार्यक्रम बनाइएको छ । निर्देशनालयले यस वर्ष अण्डा भण्डारणको लागि भवन निर्माण गर्न डेढ करोड खर्च गर्ने निर्णय गरेता पनि अण्डा उत्पादक संघले ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा इच्छा नदेखाएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघसँग ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा हेटौंडामा दुग्ध प्रशोधन कारखाना स्थापनाको काम सुरु भइसकेको छ । सहकारी संघ र प्रदेश सरकारले कारखानामा डेढ करोड रुपैयाँ खर्चिँदैछन् । मत्स्यपालक कृषकलाई निर्देशनालयमार्फत विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनेगरी ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने काठमाडौंमा फिस पार्क निर्माण तथा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । फिस पार्कको लागि भने अझैसम्म कुनै पनि प्रस्ताव नआएको निमित्त निर्देशक प्रधानले बताए ।
यस्तै निर्देशनालयले मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकासँग ५०-५० प्रतिशत लागत सहभागितामा पशुमैत्री पार्क निर्माणको लागि सम्झौता गरेको छ । चालु वर्ष गाउँपालिका र निर्देशनालयले १०-१० लाख खर्चनेछन् । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पार्क निर्माण गर्न ७ करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ । पार्कमा पशुपालनसम्बन्धी ज्ञानवद्र्धक सामग्रीहरु, घाँसका जातहरु, पशुका जातहरु, दूध तथा मासु उत्पादन बढाउने तरिकालगायतका बारेमा जानकारीमुलक होर्डिङ बोर्डलगायत अन्य संरचना निर्माण हुनेछन् ।